Izidumbu zeNyanga .....
umbuzo Izidumbu zeNyanga .....
I-2 iminyaka ye-5 imihla edlulileyo #696 by PAYSON
Enye yezinto ezintsha ezifunyanwa ngokutsha, i-Craters of the Moon, yenziwe kakuhle. Ndihlala e-Idaho, nje nge-100 okanye ngeekhilomitha ukusuka kuyo ..... EZIQHELEKILEYO!!!! Ukuba uyilungu le-JUMBO kwaye ube nebala kwi-hard drive yakho, zama. Kufanelekile. Ukuba awunayo i-akhawunti ye-JUMBO, kunokuthatha ixesha elide lokukhuphela. Kodwa, zonke izinto ezikude, zipholile.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: Yustinzz
Ixesha ukwenza page: 0.261 imizuzwana